प्रभु बैंकले माग्यो ६२ जना अफिसर कर्मचारी
सोमबार, माघ २९, २०७४ साल,
काठमाडौं । प्रभु बैंकले ६२ जना भन्दा बढि कर्मचारी माग गरेको छ । बैंकले ब्रान्च म्यानेजर (सुपरभाईजर जुनियर अफिसर लेवल) ३१ जना, रिलेक्सन÷अपरेशन अफिसर (जुनियर एसिस्टेन्ट सुपरभाईजर लेवल) ३१ जना र टेलेर (जुनियर ट्रेनिज् असिस्टेन्ट) कही संख्या माग गरेको हो ।
बैंकले उपत्यका बाहिरका विभिन्न जिल्ला कार्यालय तथा क्षेत्रिय कार्यालयका लागि कर्मचारीमा गरेको छ । ब्रान्च म्यानेजर स्नातक उतिर्ण, अपरेशन अफिसर स्नातक उर्तिण र जुनियर असिस्टेन्टकोलागि प्लस टु उर्तिण गरेकोले आवेदन दिन सक्ने बैंकले प्रकाशित गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।
बैंकमा फेबु्रअरी २६, २०१८ भित्रमा इच्छुक आवेदकले आवेदन दिइ सक्नुपर्ने छ । आवेदकले www.prabhubank.com/career बाट अनलाईन फारम भर्न सक्नेछन् ।
एभरेष्ट बैंक र भारतको पंजाव नेशनल बैंकबीच एमओयूमा हस्ताक्षर
जग्गाको कित्ताकाटमा अब घुस चल्दैन: भूमिमन्त्री अर्याल
७५३ स्थानीय तहमा रोजगार संयोजकको जागिर खुल्यो, अनलाइन फारम भर्न सकिने
माछापुच्छ्रे बैंकको ६ महिनाको खुद नाफा ७८ करोड १३ लाख रुपैयाँ
एभरेष्ट बैंकले ६ महिनामा एक अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ नाफा कमायो
रवि लामिछाने र निकिताले गरे ‘कोर्ट म्यारिज’
विश्वका चार अर्ब मानिस बराबर २६ जनाको सम्पत्ति, दिनमै साढे २ अर्ब डलर कमाउछन्
स्वस्थानी व्रत आजदेखि सुरु
साताको पहिलो दिन शेयर बजार घट्यो, नेप्सेमा साढे ८ अंकको गिरावट
काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षामा २१ हजार सिसी क्यामरा आवश्यक तर ५२९ सिसी क्यामरा जडान
‘एनटीसी, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंकका कर्मचारीलाई बोनश दिनु हुँदैन’
सूचना विभाग, दर्ता नं. ६११/०७४/०७५, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय दर्ता नं. १३५६००/०७१/०७२, ट्रूथ मिडिया प्रा.लि. द्धारा संचालित अर्थदैनिक डट कमका लागि सम्पादक : सुवर्णराज घिमिरे प्रबन्ध निर्देशक : नबराज जोशी	बाँकी »
ईमेल : truthmedia14@gmail.com